हलिउड शैलीमा निर्माण भएको नेपाली फिल्म सिमाला हङकङमा प्रदर्शन, हङकङेली दर्शकले के भने ? (भिडियोसहित) - Enepalese.com
हलिउड शैलीमा निर्माण भएको नेपाली फिल्म सिमाला हङकङमा प्रदर्शन, हङकङेली दर्शकले के भने ? (भिडियोसहित)
इनेप्लिज २०७३ असार ८ गते २:१४ मा प्रकाशित
हलिउड शैलीमा निर्माण भएको नेपाली चलचित्र सीमाला (C Mala) हङकङमा प्रदर्शन भएको छ । हिमाल पारि मुस्ताङको सेरोफेरोमा छायांकन गरिएको सीमाला हेरेपछि हङकङेली दर्शकले के भने । सिमाला द नेक्लेस हलिउड स्टाइलमा निर्माण भएको नेपाली चलचित्र हो ।
सिमाला बिदेशीसंगको सहकार्यमा निर्माण भएको नेपाली चलचित्र हो । त्यसैले कथाबस्तु नेपाली भए पनि यो चलचित्रले प्रविधिमा हलिउड फिल्मको झल्को दिन्छ । चलचित्र हिमाल पारी मुस्ताङको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ।
रुद्र गुरुङले हङकङका सिनेमाटोग्राफर डेबिड चाउसंग मिलेर निर्माण गरिएको सिमालामा मुस्ताङ वरिपरिका मनै छुने दृश्यहरु देख्न सकिन्छ । खास गरी विदेशीलाई बढी मन पर्ने यो चलचित्र नेपाली दर्शक पनि त्यति नै मोहित हुन सक्छन् ।